မန္တလေးမြီးရှည် | MyFood Myanmar
ကျွန်မက မြီးရှည်အလွန်ကြိုက်သူပီပီ အင်္ဂလန်မှာနေရတဲ့တောက်လျှောက် ကျွန်မရဲ့ အစားအစာလွမ်းတာ တွေကို ဖြေရှင်းဖို့ရာ ကိုယ်တိုင် ဘာမဆိုလုပ်စားရပါတယ်။ မြန်မာပြည်ကိုချစ်ပြီး မြန်မာအစားအစာကိုမြတ်နိုးလွန်းတာ မို့ တိုင်းတပါးမှာ 10 နှစ်နေရတဲ့ကာလများကို ကျွန်မ မြန်မာအစားအစာများကို မရမကရှာဖွေ ချက်ပြုတ်ခြင်းဖြင့် ကုန်ဆုံးခဲ့ပါတယ်။ ဒီမြီးရှည်လုပ်တာကိုတော့ ခဏခဏ လုပ်စားဖြစ်နေတာမျိုးပါ။ မန္တလေးမြို့ရဲ့ သင်္ကေတလဲဖြစ်တဲ့ မြီးရှည်လုပ်နည်းလေးကို ကျွန်မ ရေးပြပါမယ်။
မြီးရှည်လုပ်ရန် မုန့်တီဖတ် (နန်းလတ်) – 1 ပိဿာ
၀က်သား (၃-ထပ်သား (သို့) ကြက်သား -50 သား
ကြက်သွန်ဖြူ –5ကျပ်သား
ကြက်သွန်မြိတ် (လှီးပြီးသား) – လက် 2-ဆုပ်ခန့်
ပဲငပိ (အငံ) – 1 ခွက်စာ (အကြမ်းပန်းကန်)
တရုတ်နံနံ (ပါးပါးလှီးပြီးသား) – လက် 1 ဆုပ်ခန့်
ပဲငံပြာရည်အကြည် – လိုသလောက်
ကော်မှုန့် –5ကျပ်သား
ဆီတိုဟူး –7တုံးခန့်
ပဲပင်ပေါက်၊ ကြံမဆိုင် – 20 ကျပ်သားစီ
မုန့်တီဖတ်များကို ရေနွေးဖြင့်ပြုတ်ပြီး စစ်ထားပါ။ ၀က်သားများကို ချင်း၊ ကြက်သွန်ဖြူ၊ ဆားလိုအပ်သလောက် ထည့်ပြီး နူးအိနေအောင် ပြုတ်ရပါမယ်။ အမျှင်လေးများဖြစ်အောင် နွှင်ထားပါ။ ငရုတ်ပွခြောက်များကို ဆီပူမှာ ညိုရောင်သန်းလာသည်အထိကြော်ကာ အေးလျှင် ညက်အောင်ထောင်းကာ ကြော်ဆီမှာပဲ ပြန်စိမ်ထားပါ။
ဆီတိုဟူးကို ရေနွေးဖြင့် မပျစ်မကျဲ ဖျော်ထားပါ။
ကော်မှုန့်ကို ရေနွေးဖြင့်ဖျော်ပြီး မပျစ်မကျဲ ဖျော်ထားပါ။
မြီးရှည်ဖတ်တစ်ပွဲစာကို ပန်းကန်တွင် ထည့်ပါ။ ပဲငံပြာရည် (အချိုစားဇွန်း ၁ ဇွန်း)၊ ကော်ရည် ၁ ဇွန်း (စားပွဲတင်ဇွန်း)၊ ပဲငပိ ၁ ဇွန်း (အချိုဇွန်း)၊ ငရုတ်ဆီ ၁ ဇွန်း (စားပွဲတင်)၊ ပဲပင်ပေါက်၊ ကြက်သွန်မြိတ်၊ ကြံမဆိုင်၊ ဆီတိုဟူး (၁ ဇွန်း-အချိုစားဇွန်း)၊ အသားပြုတ် လိုသလောက်ဖြင့်ပြင်ပေးပါ။ ဂျုံလုံးကြော်အစား အီကြာကွေးကို ညှပ်ထဲ့ပေးပါ။ စားခါမှ နှံ့အောင် မွှေပေးရပါမယ်
၀တ်ပြုတ်ရည် (သို့) ကြက်ပြုတ်ရည် ကျဲကျဲဆူဆူကို တရုတ်နံနံ၊ ကြက်သွန်ဖြူ ဓါးပြားရိုက်ပေါ် လောင်းထည့်ကာ ငရုတ်ကောင်း၊ ဆားခတ်ကာ တွဲစားနိုင်ပါပြီ။
Throughout my stay in England, I had to make do of the cravings by myself asaMeeShay lover. Asatrue Myanmar who loves Myammar food, I spent all those 10 years inacountry so far from my hometown discovering and experimenting the desire for my own comfort food, Myanmar Traditional food. This dish which I often make and also is one of the signature dishes of Mandalay will be shared now with all of you.
Ei Thet https://www.facebook.com/ethet1
Ad | Recipes | ကျန်းမာရေး - Health | မီးဖိုချောင် နှင့် ဆက်နွယ်သည့် အကြာင်းအရာများ - Kitchen | အသုပ် - Salad | အထွေထွေ ဗဟုသုတ - General Knowledge
ချဉ်ချိုစပ် အရသာနဲ့ သီးစုံထောင်းလေး လုပ်စားရအောင်